Roma Oo Iska Xaadirsay Wareega 8-da CL Kadib Markii Ay Soo Dar-dareen Shakhtar Donetsk [Sawiro] %
Kooxda kubada cagta AC Roma, ee ka dhisan Magaalada caasimada u ah wadanka Talyaaniga ayaa waxay usoo baxday wareega Sideed dhamaadka ee Champions League, kadib markii ay guul weyn uga gaareen garoonkooda dhigooda Shakhtar Donetsk.
Kooxda reer Italy ayaa waxay kusoo badisay ciyaartaan oo lugta labaad ee wareega 16-ka Champions League ka tirsaneed 1-0, waxayna ka dhigan tahay in wadar ahaan labada lugood ay ku kala baxeen kooxahaan 2-2, laakiin Roma ayaa xeerkan tartanka kusoo baxday
Ciyaaryahanka lagu magacaabo Edin Dzeko, ayaa wuxuu udhaliyay kooxdiisa goolka kaliya ee farqiga keenay waxaaan uu yimid goolkiisa daqiiqadii 52aad ee qeybta labaad, maadaama Bogii koowaad ay kusoo kala baxeen labada koox 0-0.
Kooxda Roma ayaa waxay kulankaan haysata kubadda 38% taasoo ka dhigan in Banooni ahaa kooxdii kasoo horjeeda ay ka fiicneed, laakiin wiilasheeda uu saaciday nasiibka iyo sida wax ku oolka ahayd oo ay ushaqeeyeen intii uu kulanku socday.
Sidoo kale, ciyaarta ayaa waxaa laga bixiyay Afar Kaar oo labo kamid ah ahaayeen Jaalo, waxaana la kala siiyay labadda dhinac, halka Kaarka kale oo ahaa Roose lasiiyay loo taagay ciyaaryahan udheela Shakhtar Donetsk, kaasoo ah Ivan Ordets.
Sikastaba, AS Roma, ayaa waxay ku biireysaa liis kooxo ah, kuwaasoo ay ugu waa weyn yihiin Man City yo Real Madrid, islamarkaana ay iska xaadiriyey wareega Sideed dhamaadka koobka Dhaga-weyne, kaasoo meel xiiso leh maraya.
AS Roma vs Shakhtar DonetskChampions League
Hordhac: Barca vs Chelsea – Wax Walba Oo Aad Uga Baahan Kulankaan Adag Ee Lugta 2aad Wareega 16 CL